‘कारखाना’ निर्देशकको काम खोसियो, कस्तो बन्ला फिल्म ? « Ramailo छ
‘कारखाना’ निर्देशकको काम खोसियो, कस्तो बन्ला फिल्म ?
तपाईं फिल्मको मेरुदण्ड कसलाई मान्नुहुन्छ ? फिल्म राम्रो या नराम्रो भएको गुण दोष कसलाई दिनुहुन्छ ? पक्कै पनि निर्देशकलाई दिनुहुन्छ होला । फिल्मका हरेक पक्षको क्रेडिट निर्देशकलाई दिनुपर्ने हो । तर फिल्म ‘कारखाना’ का निर्देशक अमरदिप सापकोटा भने यी गुण या दोषको क्रेडिट लिनुपुर्व नै फिल्मबाट अलग्एिका छन् ।
सुटिङमा रमाइलो गर्दै नायिका बर्षा सिवाकोटी र निर्देशक सापकोटा ।
निर्माताद्वाय सुदिप खड्का र अमर बज्रचार्यले निर्देशक सापकोटालाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छाएर सम्पादन कार्य आफैंले सम्हालि रहेका हुन् । ‘वान लाइन काटेपछि नै निर्देशक सापकोटा फिल्मबाट आउट भएका हुन्’, फिल्म वृत्तमा गाइंगुइ चल्ने गरेको छ । उसो त निर्देशक र निर्माताहरुबिचको झगडाले मुद्धामामिलाको रुप समेत लिन खोजेको बताइन्छ । यद्पी निर्देशक सापकोटा निर्माताले सम्पादन गरेको रमिता हेरिरहेका छन् ।
मायाले बोलेको गीत रि सुट गर्न जाँदा निर्माताद्वाले निर्देशक सापकोटाको जिम्मेवारी खोसेका थिए । यी दुई निर्माता कफी र कपडाको व्यावसायी हुन् । निर्देशक बिना नै सम्पादन गरिएको कारखाना कस्तो बन्ला त ? भदौ असार १६ सम्म कुरौं ।